रवि लामिछानेजी,पत्रकारिता निष्पक्ष गर्ने कि अतिरञ्जित ? - Himalayan Kangaroo
रवि लामिछानेजी,पत्रकारिता निष्पक्ष गर्ने कि अतिरञ्जित ?
Posted by Himalayan Kangaroo | १९ जेष्ठ २०७६, आईतवार ०१:३९ |
अष्ट्रेलियाभन्दा विद्यार्थी र आप्रवासीलाई सुविधा, भविष्य र सुरक्षा भएको अन्य कुनै देश छ भने जानकारी पाउँ ।
नेपालबाट आएका टेलिभिजनकर्मी रवि लामिछानेको कार्यक्रममा जे सोचेर हामीलाई बोलाइयो, गइयो, बिल्कुलै फरक पाइयो । मानौं अहिले अष्ट्रेलियालाई सारै तल देखाएर स्कोर गर्ने होड चलिराखेको छ ।
अष्ट्रेलिया बसाइको बिगत २३ वर्षमा कुनै दिन यहाँ आएकोमा पछुतो लागेन । बरु चाकडी र भनसुन बिना दुख गरेर खान पाइने व्यवस्थालाई सधै सलाम गरियो । यहाँको जिन्दगी भाँडा माझ्नेबाटै सुरु भएको हो । तर यही बसेर पनि नेपाल र नेपालीलाई सक्दो गर्न केहीले रोकेन । अहिले बिगत र वर्तमानमा धेरैको मेहनतले बनेको अष्ट्रेलियन नेपाली समाज र अस्तित्वको अस्मितामाथि गैर जिम्मेवार तरिकाले तथानाम धावा बोलिदा अष्ट्रेलिया र नेपालभित्र धेरैको चित्त दुखेको पाइएको छ । यसमा कसको के लगानी, नियत र उदेश्य छ ? त्यो त समयले देखाउला । एउटा निश्चित कुरा के छ भने, यसले थुप्रै अष्ट्रेलिया आउन, पढ्न र घुम्न चाहने अन्यलाई हानी पुर्याउने काम अबश्य गर्छ ।
पत्रकारिता निष्पक्ष होस्, स्तरीय होस, समाजको असली चित्रण गरोस र केहि सिकाओस । उत्तेजना र भिडले क्षणिक दर्शक बढाउला र मजा देला, तर समाज र देशको दुरगामी हीत अवश्य गर्दैन । जुन देशमा आउन संसारभरीबाट तँछाड मछाड हुन्छ, जुन देशले कुनै एउटा देशबाट मात्र मान्छे आओस भनेर टाउको दुखाउदैन । आवश्यक परे अष्ट्रेलिया आउन ढोका खोलिदिने यहाँको सरकारले बन्द गर्न पनि धेरै समय लिने छैन । हाम्रो पुरानो उक्ति “साना दुखले आज्र्याको मुलुक होइन“ सबैलाई चेतना भया ।
अष्ट्रेलिया आउने र रहने नेपालीबाट धेरैले गर्ने अपेक्षा भनेको कुनै पनि बहस सभ्य, सौम्य, बौद्दिक, तार्किक र सन्तुलित होस् भन्ने हुन्छ । सार्वजनिक ठाउमा सार्वजनिक चासोका कार्यक्रमहरु गर्दै गर्दा यहाँका आधारभूत नियम कानुन थाहा हुनु जरुरी छ । म सम्पूर्ण रुपमा सक्षम छु, म अष्ट्रेलियामा काममा भर पर्ने होइन पढ्ने हो भनेर एप्लाई गरेर, यदि त्यो कन्डिसनबाट बाहिर परेमा मेरो भिसा क्यान्सेल हुँदा मन्जुर छ भन्ने भिसा बोकेर बसेका विद्यार्थीलाई उनीहरुका आर्थिक कमजोरीहरु उनीहरुमार्फत सार्वजनिक रुपमा टिभीमा ल्याई दिदा उनीहरुकै भिसा क्यान्सिल हुने आधार बन्न सक्छ । अष्ट्रेलियाको नियम अनुसार कुनै पनि कमर्सिअल मेटेरिअल टिभीले प्रसार गर्ने सम्बन्धि पनि परिचित हुनु जरुरी छ ।
अहिलेको जमानामा हामी सबैको हातमा रहेको मोबाइलले टिभी रेडियो भन्दा पाओरफुल मिडियाको काम गर्छ । सदुपयोग भएमा युरनिएमबाट जबर्दस्त विद्युत निस्कन्छ, दुरुपयोग भए बिनाशक बम बन्छ । पढाइ, अंग्रेजी र राम्रो आर्थिक स्थिति नभई, विद्यार्थीले त्यो प्रमाणित गर्ने प्रसस्त आधार नदेखाई अष्ट्रेलियामा भर्ना लिने चलन पनि छैन र सरकारले भिसा दिने चलन पनि छैन ।
त्यसैले यहाँ आएर काम गर्ने भनेको बोनस मात्र सम्झनु पर्छ, मात्र अधार होइन । स्टेसनमा सुत्ने र बेवारिसे लास भन्ने नेपालमा ब्यापक प्रचार चाहि अलिक सन्तुलित कुरा होइन । यहाँको नेपाली समुदायले सक्दो गरेकै छ । नेपालको एक चौथाई जनसंख्या बिदेशमा रहेको स्थितिमा एनआरएन अथवा अन्य स्वयमसेवी संस्थाबाट मात्रै धेरै आशा गर्नु पनि व्यवहारिक होइन । धैर्य, सहिष्णुता, संघर्ष बिना यहाँ पनि गाह्रो छ । आखिर, रोम पनि एकै दिनमा बनेको होइन ।
(मन केसीको फेसबुक वालबाट सम्पादित)
Previousयुईएफए च्याम्पयन्स लिगको उपाधि लिभरपुललाई
Nextनेपाली सेनामा आत्महत्याको क्रम बढ्दो,यी हुन् कारण
हुन्डी कारोबारीविरुद्ध मुद्दा, ४ अर्ब १२ कारोड बिगो
१२ भाद्र २०७४, सोमबार ०१:३९
स्थानीय तहको निर्वाचन सहभागी हुन मधेसी मोर्चालाई प्रधानमन्त्रीको आह्वान
१७ फाल्गुन २०७३, मंगलवार १२:३२
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका १६ वटा निर्णय सार्वजनिक
९ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १५:१९
चौथो सत्तारोहणसँगै चुनौतीको चाङमा देउवा
२४ जेष्ठ २०७४, बुधबार ०१:४७
अष्ट्रेलियाको ३० हजार घरमा विद्युत सेवा अवरुद्ध
भ्रमणबापत विदेशिनेभन्दा स्वदेशिने रकम बढी
वैदेशिक रोजगारपछि नेपालमै मृत्यु भए पनि श्रमिकका आफन्तलाई ७ लाख सहयोग